Etu esi eme donuts eji esi ulo - Recipe | Ntụziaka
Ngela | | Original Desserts, Ihe ọerụ Dụ maka ụmụaka
3 N'ihi frosting
Maka akwukwo nri
140g ntụ ọka
90ml nke mmiri ọkụ
3g yist nke bred ọhụrụ
15ml mmiri ara ehi
Na ritu nke oroma
20g yist nke bred ọhụrụ
125g ntụ ọka
5g nke nnu
60g butter na ime ụlọ
200 gr nke icing shuga
6 tablespoons nke mmiri
2-3 tablespoons nke vanilla kachasi mkpa
Ọtụtụ n'ime unu ahụla nke anyị Arụrụ n'ụlọ Donuts uzommeputa, ma e nwekwara ọtụtụ n’ime unu ndị jụrụ m ma ha nwere ike ime ha. Taa, anyị nwere usoro nhazi site na nkwụsị, ma jiri klastein Bella Rossa anyị nwetara nke ọhụrụ nke 1200W na lita 5, nke nyeere m aka ịkwadebe mgwakota agwa ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ na ikuku.
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ kwadebe ihe gbara ụka na nke a anyị ga-amalite site na imeghe mmiri dị na yistOzugbo anyị gbanyụrụ ya, anyị na-agbakwunye ntụ ọka ma jiri aka anyị mepụta bọọlụ. Ozugbo anyị nwere ya, Anyị na-ahapụ ya n'ime akpa kpuchie ya na akwa nhicha ma hapụ ya ka ọ gbaa ụka ruo mgbe ọ ga-abawanye okpukpu abụọ n'ogo maka ihe dị ka nkeji iri anọ na ise.
Ozugbo oge a gafere, anyị na-aga n'ihu na mgwakota agwa. Anyị na-etinye mmiri ara ehi na bee oroma ruo mgbe ọ ga-amalite otuto. Ozugbo ọ na-esi, anyị na-ewepụ ya na ọkụ wee wepụ bee oroma.
Anyị na-edozi ihe yist fọdụrụ na mmiri ara ehi ma wụsa ya na robot akpa. Anyị na-agbakwunye sourdough, shuga na ntụ ọka. Anyị na-ekpokọta ihe niile na nọmba mmemme nke 5 nke igwekota ruo mgbe anyị hụrụ na mgwakota agwa dị kọmpat (ihe dịka 10 nkeji).
Gbakwunye nkochi ime akwa 4, na nnu ma hapu ihe dika 5 nkeji rue mgbe o gwakọtara. Ozugbo anyị nwere ntụ ọka, ọ fọrọ nke nta ka anyị kwadebe, anyị na-agbakwunye butter.
Ozugbo mgwakota agwa ahụ gwụchara, Anyị na-ewere bọl sitere na akpa wee gbasaa ya na obere mmanụ oliv. Anyị na-ekpuchi ya na akwa plastik wee mee ka mgwakota agwa zuo ike maka elekere ọzọ ruo mgbe ọ ga-abụ okpukpu abụọ.
Anyị na-agbatị mgwakota agwa site n'itinye a mkpa oyi akwa mmanụ na mgwakota agwa na gbatịa ruo mgbe ọ bụ ihe dị ka 1,5 cm oké.
Na a kuki cutter na kalama okpu ka donut udi. Anyị na-ahapụ ha ka ha buru ụfọdụ Nkeji 30 ruo mgbe anyị ga-ahụ ihe ha dị ka ya nke aza.
Kama ighe ha, n'ihi ya ha nwere obere manu, anyị ga-eme ha n'ekwú. Ya mere, anyị na-eme ka oven sie ike ruo ogo 180 na mgbe ọ dị ọkụ, anyị na-etinye ha. Anyị na-ahapụ ha ka ha gbaa aja aja n'akụkụ abụọ. Fọdụ Nkeji 7 n'akụkụ ọ bụla.
N'ime efere anyị tinyere 6 tablespoons nke mmiri na 2-3 nke vanilla kachasi mkpa. Anyị na-agbakwunye 150 gr nke shuga icing. Gwakọta nke ọma, site n'enyemaka nke ahịhịa silicone, anyị na-ese nke ọ bụla na donuts ozugbo oyi.
Mgbe ahụ, anyị hapụrụ ha ka ha zuo ike n’elu ite okwute.
Na-atọ ụtọ !!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Recetin » Ntụziaka » Original Desserts » Etu esi eme Donuts
Enweghị m igwekota mana echere m na ọ ga-abụ otu, nri? M dee ihe isi nri !!
Daalụ : )
Ee, ha na-apụta kpọmkwem otu ihe :) Mua!
Otu ajụjụ, tinye 15ml nke mmiri ara ehi, nke ahụ bụ eziokwu? Ọ dị m ka ọ dị ezigbo obere ka esi sie na bee oroma. Daalụ
N'ezie, usoro a na-atọ ụtọ mmiri ara ehi. Nwere ike itinyekwu ma jiri naanị 15 g.
Aghọtaghị m nke a, "Anyị hapụrụ ha ka ha bilie ọzọ nkeji 30 ruo mgbe anyị hụrụ na ha dị ka okuko." Ọ pụtara na anyị hapụrụ ha ka ha zuo ike?
Zaghachi Ana Vi Sánchez Moreno
EE, levar pụtara izu ike, mana m chere na ọkara elekere na-egosi, kama ọ bụ mgbe ị hụrụ ha ejirila olu ha okpukpu abụọ, oge dịgasị iche dabere na ọnọdụ okpomọkụ nke kichin gị ma ọ bụ ụlọ gị n'ozuzu, ewezuga ọnọdụ okpomọkụ nke gị Enwere m olileanya na m enyerela gị aka.
Zaghachi Jessica Perez Perez
I meela nke ukwuu maka azịza gị! Ọ bụrụ na ị nyeere m aka: D Abụ m newbie «achịcha dị iche iche»… hee
Ntụziaka a na-amasị m.
Ọ ga-amasị m ịnweta ya, ewezuga ịme donuts, ị nwere ike ịme ọtụtụ ihe
Ọfọn, na ihe ụmụ m dị ka donuts na igwekota ga-adị mma, ọtụtụ oge anaghị m eme achịcha dị iche iche, n'ihi iwe m na-etinye ntụ m aka na mgwakota agwa.
Zaghachi Pilar Sanz Bretín
Akụkọ Smurfette dijo
Enwere m ike iji nnukwu maka Ezi ntụziaka !! Olile anya metu m !!
Zaghachi na Smurfette Akụkọ
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na o metụrụ m aka ma nwee ike inye donuts maka obere nwa m, nke ọ hụrụ n'anya !!!
Ole, Achọrọ m ịkụ ha kama eghe. Ọkwa dị obere, hehehehe
Zaghachi Rosa Maria
Enwere m mmasị isi nri, n'afọ a ana m ewere ohere ịme nri ebe ọ bụ na m gụchara akara m na ọ dị nwute na enweghị m ọrụ, enwere m ike iji ihe nhazi nri ahụ mee ụfọdụ n'ime nri esi esi nri, dị ka donuts ndị a. :)
Akwukwo ihe omimi di iche na aka ... ma ha puta di uku! Daalụ.
Zaghachi Nadia Walid
Mari Carmen Mora More dijo
Daalụ maka inye anyị ụzọ esi akwadebe ha na oven, ọ masịghị m maka ị ga-esi ghee ha.M jiri aka m mee ntụ ọka ahụ, enwere m olile anya na ha ga-apụta otu (karịa ma ọ bụ obere).
Zaghachi Mari Carmen Mora Mas
Kedu ihe bụ ntụ ọka ike? Esi m Venezuela. Ọ ga-abụ LEUDING ntụ ọka?
Zaghachi Yusleimy de Álvarez
a ga-eji ntụ ọka ike mee ihe ka mma iji mee achịcha ma ree ya na ldl.
Ee, ọ dị ka ntụ ọka na-arị elu onwe ya.M na-ekwu na donuts ga-aka mma!
Amaara m otu esi eme donuts !! Panrico na-ama jijiji na amụma gị maka ịkwalite ụgwọ ọrụ ndị ọrụ na ndị ọrụ na-agbapụ!
Zaghachi Aixa Muñoz García
Ummmm kedu ụdị nri dị ụtọ ị ga-ahụ ma ọ bụrụ na enwere ihu ọma na m na-eme nhazi a na ndị bụ exo na ibe a nwere nnukwu ịhụnanya hụrụ ndị ezinụlọ m na ndị enyi m, daalụ maka ime ka kichin dịkwuo mfe ma nwekwuo obi ụtọ
Zaghachi ana isabel
Uyyy, oke ọgaranya! na yeah, achọrọ m onye na-egwu ntụ ọka! Kemgbe oge ọkọchị anyị kpebiri ime achịcha anyị na obere ụmụaka 3 ma na-agbanye n'eziokwu na mgwakota agwa na-apụta nke ọma karị, kedu ezumike maka ogwe aka yana oge ịchekwa !!
Patricia Nwachukwu dijo
UUUMMMMMMMM… .. ihe na amasị m donuts na ndị ọcha !!!! Ahuru m ya n'anya !!!!! Aga m eme ha na ngwụcha izu a na enwere m ya n'efu. Ha ga-aba ọgaranya site na uzommeputa nke ị nyere m. Nsutu!
Zaghachi Patricia Mª
Marta Nwachukwu dijo
Ana m ekere òkè
Zaghachi Marta Mgl
Bịanụ, enweelarị m ntụrụndụ maka izu ụka a !!!! N'ụdị donuts kwesịrị ịbụ nnukwu !!! ọmịiko enweghị inwe igwekota mana enwere m olile anya inwe ihu ọma !!!!!!
Zaghachi ka angeles martin moya
Enweghị m robot, mana m ga-agba mbọ ịhụ otu o si apụta.
Aga m agwa gị.
Maria Jose Jimenez Ortega dijo
mmm echem na aga m anwale akwa a.
Zaghachi Maria José Jiménez Ortega
M debanyere aha ọgwụ n'ihi na m hụrụ ya n'anya !!!! Daalụ maka gị niile ndị tinyere anyị, ị dị mma, gaa n'ihu otu a.
Zaghachi Paola Sanchez Bocalandro
Zaghachi Trini Hermosilla Mompo
Ndewo Angela, m dee usoro ị na-eme nke ọma. Ana m eche ịzụrụ obere igwe nke ndị a, n'ihi na ọnụahịa ahụ na-ata taa. Ọ na-amasị m Klarstein Lucia Rossa Kitchen robot, chopper, mixer, n'ihi na ọ nwere ọtụtụ ngwa ma anaghị arị elu na ọnụahịa, ebe ọ bụ na anaghị ama robot amachaghị m ọtụtụ ozi, mgbe m hụrụ na ị na-eji ya, nke ọma kpebisiri ike ịjụ gị otu ị si eme ya, ma ọ bụrụ na ịkwado ya maka iji kichin nkịtị. Daalụ n'ọdịnihu.
Zaghachi katy b
Emeela otu ka ha kwuo maka robot a… ọ bụrụ n'ikpebie zụta klọbọt na-agwakọta klọọkụ, chọọ anyị tinye anyị… Otu a na-akpọ Klarstein Lucia Recipes and Functioning… Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ya, zitere m otu email na m ga-agbakwunye gị jessica_ana @ msn, com
Ezigbo ụdị dị iche iche nke ụdị nhazi a.
Zaghachi Pedro Perez
Say na-ekwu na anyị na-etinye ha na oven maka 7 nkeji n'akụkụ ọ bụla ... nke ahụ pụtara itinye naanị akụkụ ala nke oven electric. Ọ ga-abụ otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na anyị etinye ya na fan na elu na ala?
Zaghachi Mª Angeles
15 ml nke mmiri ara ehi? Ntuziaka a ọ dị mma?
Zaghachi sonia trasmonte mancera
Enwekwara m obi abụọ ahụ. 15 ml bụ tablespoon na enweghị ohere maka bee oroma ...
Nnọọ, nsogbu m bụ na mgwakota agwa na-apụta nke ọma ma na-arapara nke m ga-etinyekwu ntụ ọka na nke na-eduga ya na ọ gaghị enwe oke nro.
Zaghachi na adasaura
Ndewo, chi ọma, achọrọ m ịma ma ọ bụ 15ml ma ọ bụ 150ml, daalụ
Zaghachi Anne Keisu
Morningtụtụ ọma, m nwere Klarstein Lucia kichin robot, na oge ụfọdụ gara aga, m kere a facebook otu nke na anyị niile nwere ike itinye Ezi ntụziaka mere na nke a robot… ga-amasị gị na-otu? Mind na-eche ma ọ bụrụ na m na -ekere gị uzommeputa na ya? A na-akpọ otu a Klarstein Lucia Recipes and Functioning… mana Bella robot sokwa na otu a ebe ọ bụ na ọrụ ịgwakọta bụ otu… ọ bụrụ na ị nwere mmasị tinye anyị ma ọ bụ zitere anyị @ ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta anyị na m ga-agbakwunye gị jessica_ana @ msn.com
Ndewo Jessica, ị nwere ike ịkekọrịta usoro anyị n’enweghị nsogbu! :) ee, kwuru anyị na anyị ga-aza ajụjụ na gị na otu! Echiche kacha mma!
Ivan onyema dijo
Site na 125 gr nke ntụ ọka siri ike maka mgwakota agwa ọ gaghị ekwe omume na iji nnukwu hydration ihe dị iche na puree ga-apụta, belụsọ ma inwere onye anwansi anwansi ma obu aka nke Hulk. Ọ bụrụ na ihe ọdoụ sourụ gbara ụka dị ụtọ ma tinyezie yolk 4 na butter gram 60, ị ga-agbakwunye ntụ ọka ọzọ, ee ma ọ bụ ee, iji mee ka ọ dịkarịa ala ijikwa ya. Ma ọ dịkarịa ala na nke m, ọ bụ otu ahụ.
Zaghachi Iván López
Ọnọdụ okpomọkụ nke oven dị otu, belụsọ na ị kọwabeghị na ọ dị naanị n'elu ma ọ bụrụ na itinye ya 7 nkeji na n'akụkụ ọ bụla, nke dị mma mana ọ bụ na 4 na ọnọdụ okpomọkụ dị ala karịa ị nwere ha dịka a ga - asị na ha bụ ike donuts, ị gbara ha ọkụ.
Biko. Nwere ike ịgwa m ma nha ahụ ziri ezi? M soro usoro na ha anaghị apụta nke ọma. Daalụ.
Zaghachi M.José Heras
Otu esi eme pizza na onye na - eme sanwichi
Obi ụtọ osikapa pudding echiche